China Padlock၊ တုပကြေးနီသော့ခတ်၊ သံမဏိသော့ခတ်၊ သစ်ရွက်သော့ခတ်ခြင်း၊ ခိုးယူမှုဆန့်ကျင်ခြင်း၊ စကားဝှက်သော့ခတ်ခြင်း၊ လက်ဗွေသော့ခတ်ခြင်းနှင့်အခြားသော့ခလောက်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ | Boda
သော့ခလောက်၏မျိုးကွဲများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များစွာရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သော့ခတ်အရွယ်အစားကိုသော့၏ကိုယ်ထည်အကျယ်နှင့်ဆုံးဖြတ်သည်။ သော့၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုသော့ခတ်ရောင်ခြည်၏အမြင့်ကဆုံးဖြတ်သည်။ သော့ခတ်ခြင်းစီးရီးကိုသော့ခတ်၏ဖွင့်လှစ်သောပုံစံများဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။ အဖွင့်၊ အလျားလိုက်ဖွင့်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏များသောအားဖြင့်အသုံးပြုသောသော့ခလောက်များသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ပွင့်လင်း။ အလျားလိုက်ဖွင့်ကြသည်။
ဆိုလိုသည်မှာသော့သည်သော့ခတ်ဆလင်ဒါ၏သော့ပေါက်ထဲသို့ထည့်သောအခါထိပ်ကိုသော့ဖွင့်ခြင်းဟုခေါ်သောအလှည့်မပါဘဲအထက်သို့ဆွဲနိုင်သည်။ ဤသည်သော့ခလောက်သည်အထူးသဖြင့်မွေးကင်းစကလေးငယ်များကိုင်ဆောင်ရန်သို့မဟုတ်ဆောင်းပါးများတင်ရန်မသင့်တော်သောပွင့်လင်းသောလူများအားသယ်ဆောင်ရန်အတွက်အထူးသင့်တော်သည်။ "နှစ်ကြိမ်သော့ခလောက်" ဟုခေါ်သောသော့သည်သော့နှစ်ခုကိုအလုပ်လုပ်မှသာဖွင့်နိုင်သည်သောသော့ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းသည်ခိုင်မာသောလုံခြုံရေးစွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီးလူနှစ် ဦး သော့ခတ်ထားရန်လိုအပ်ပြီးသိုလှောင်ရုံနှင့်ဘဏ်ကဲ့သို့တစ်ချိန်တည်းတွင်သော့ခလောက်ဖွင့်ရန်လူနှစ် ဦး ရောက်ရှိနေသောအခါများအတွက်သင့်လျော်သည်။
ဖွင့်လှစ်သည့်စနစ် (တိုက်ရိုက်ဖွင့်ခြင်း၊ အလျားလိုက်ဖွင့်ခြင်း၊ အပေါ်ဆုံးဖွင့်ခြင်း၊ နှစ်ဆဖွင့်ခြင်း) အရ padlocks များကိုခွဲခြားခြင်းအပြင်၎င်းကိုသော့ခလောက်၏အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းမှုအရလည်းခွဲခြားနိုင်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဘုံအမျိုးအစားများမှာ - စကျင်ကျောက်ဖွဲ့စည်းပုံသော့ခလောက်
ထိုသို့သော့ခတ်မျိုးသည်ဆလင်ဒါတွင်အတားအဆီးများကိုသတ်မှတ်ရန်ဆလင်ဒါပေါက်ကိုအသုံးပြုသည်။ သို့မှသာသော့ခတ်ဆလင်ဒါသည်သော့၏လုပ်ဆောင်မှုကိုလှည့ ်၍ မရနိုင်ပါ။ ကျည်ဆံဖွဲ့စည်းပုံသည်သော့ခလောက်များ၏အသုံးများသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ သော့ခတ်ထားသည့်ကိုယ်ထည်သည်သတ္တုအပိုင်းအစများဖြင့်ထပ်ထားသည်၊ ၎င်းသည်လူတို့အားထူထဲပြီးအစိုင်အခဲဟုခံစားရစေသည်။ ၎င်းကို "ထောင်ပေါင်းများစွာသောသော့ခတ်" ဟုခေါ်သည်။ သို့သော်၎င်း၏အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းမှုသည်ဘိလိယက်ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်သဖြင့်ကျည်ဆံဖွဲ့စည်းပုံသော့ခလောက်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ထိုသို့သော့ခတ်မျိုးသည်စာရွက်သတ္တုကိုမတူညီသောပုံစံမျိုးဖြင့် အသုံးပြု၍ ပိတ်ဆို့ရန်နှင့်သော့ခတ်ရန်။ ထိုကဲ့သို့သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမျိုးကိုမကြာခဏသွပ်သတ္တုစပ် (သို့) ၎င်းတွင်သော့ခတ်များအသုံးပြုသည်။
သံလိုက်တွန်းလှန်မှုနိယာမအရသံလိုက်သော့ခတ်ဆလင်ဒါစနစ်ကိုအသုံးပြုသည်။ သော့ခတ် core groove နှင့်လုံခြုံရေး pin ကြားရှိသော့နှင့်တူသောသံလိုက်ပြားများနှင့်အတူစဉ်ဆက်မပြတ်သံလိုက်သတ္တုအခန်းကန့်ဘုတ်ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ သော့သည်လုံခြုံရေး pin နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုမရှိပါ။ slot မဟုတ်သည့်သံလိုက်သော့ကိုသော့ခတ်ဆလင်ဒါအထိုင်ထဲသို့ချောချောမွေ့မွေ့ထည့်သွင်းသောအခါသတ္တုအခန်းကန့်ကိုထိလိုက်ပြီးခိုင်မာသည့်တွန်းအားကိုထုတ်ပေးသောကြောင့်သော့ကိုအလွယ်တကူဖွင့်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်သံလိုက်ဆွဲဆောင်မှု၏နိယာမကိုလည်းသတ္တုပြားကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဆွဲ။ နွေ ဦး ရာသီတွင်သော့ခတ်ရန်။
သော့ခလောက်များမှာ - သံမဏိသော့ခလောက်၊ ကြေးနီသော့ခတ်၊ Du-plated သံသော့ခလောက်၊ မီးခိုးရောင်မီးခတ်၊ တုပကြေးနီသော့ခလောက်၊ သွပ်သတ္တုစပ်သော့ခလောက်၊ ချိတ်ချိတ်၊
၁။ သံမဏိသော့ခလောက် - ဤသော့ခလောက်အမျိုးအစားသည်ခိုင်ခံ့သောဓာတ်တိုးနိုင်မှုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပြီးအပြင်ဘက်တွင်အသုံးပြုရန်သင့်တော်သည်။ သို့သော်ပြုပြင်ရန်ခက်ခဲခြင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားခြင်းတို့ကြောင့်၎င်းကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်အသုံးပြုခဲသည်။
၂။ ကြေးနီသော့ခလောက် - သော့၏အဓိကပစ္စည်းသည်ကြေးနီဖြစ်ပြီး၊ များသောအားဖြင့်ကြေးနီသော့ခလောက်ငယ်သည်အရွယ်အစား ၄၀ မီလီမီတာအောက်သာရှိသည်။ အဓိကအားဖြင့်ကြေးနီစျေးနှုန်းမြင့်မားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
3. သံ Padlocks: အလွန်ဘုံ။
ခ။ မီးခိုးရောင်သံသော့ခလောက် - အပေါ်ယံမျက်နှာပြင်ကိုမီးခိုးရောင်ဆေးသုတ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ပြီး၊ ဤအမျိုးအစားတွင်ပါ ၀ င်သောရောင်စုံသော့ခလောက်များပေါ်လာသည်။
C. အတုကြေးနီသော့ခလောက် - ၎င်းသည်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိကြေးနီပြားကိုရည်ညွှန်းသော electroplated iron padlock မှပိုင်ဆိုင်သည်
4. သွပ်သတ္တုစပ်သော့ခလောက် - ဤသော့ခလောက်ကိုသေပုံသွင်းစက်ဖြင့်တိကျမှန်ကန်စွာပုံသွင်းသည်။
3 shape ပုံသဏ္、ာန် အားဖြင့်
3. U-type ကိုသော့ခတ်
BOSENDA သည်သော့ခလောက်အမျိုးမျိုးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သော့ခလောက်များကိုအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများ၊ တောင်အမေရိက၊ ဥရောပ၊ အရှေ့ဥရောပနိုင်ငံများနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းသို့တင်ပို့သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
ရှေ့သို့ PVC မိုးရွာရွာဖောင်ဒေးရှင်း၊ PE မိုးရွာသောအထည်၊ ထရပ်ကားအဖုံး
နောက်တစ်ခု: Chain၊ lifting chain၊ သွပ်သွင်းခြင်းသံကြိုး၊ သံမဏိကွင်းဆက်၊ အမျိုးမျိုးသောသတ်မှတ်ချက်များ
လက်ဗွေ Code ကိုသော့ခတ်